တြိဂံ Fog ပါးစပ် 500ml Ultrasonic Air ကို Humidifier China Manufacturer
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:500ml Air ကို Humidifier,500ml Ultrasonic Air ကို Humidifier,Air ကို Humidifier 500
Home > ထုတ်ကုန်များ > မူလစာမျက်နှာ Humidifier > တြိဂံ Fog ပါးစပ် 500ml Ultrasonic Air ကို Humidifier
တြိဂံ Fog ပါးစပ် 500ml Ultrasonic Air ကို Humidifier
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 205mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 355 525 * 430mm / 12pcs
အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် & Long ကအချိန်အလုပ်လုပ်ခြင်း: အကြီးစားရေတိုင်ကီ 500ml ရေကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကအိမ်မှာ humidifier ထက်ပိုမို 13 နာရီ running ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
ဘက်စုံသုံး: သင်မြင့်မားခြင်းသို့မဟုတ်အနိမ့်အခိုးအငွေ့ mode ကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ, 1 နာရီ / 3H / 6H set / အချိန်အပြေးအပေါ်ဆက်လက်ထွန်းတောက်မှိန်အကြား7အလင်းရောင်အရောင်ကိုရွေးပါ။ သငျသညျအိပ်သောအခါအသင်ကခငျြ don`t လျှင်အလင်းလုံးဝပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
လှငျအလိုအလျောက် Shut-off: လေထု humidifier ရေထဲကပြေးလာသောအခါအလိုအလျောက်တစ်ဦးရိုးမား humidifier ကို turn off ။ သငျသညျအိပျပျြောနေစဉ်အတွင်းတစ်အနံ့ပျံ့အသုံးပြုချင်လျှင်ဒီရေနံ humidifier စုံလင်သည်။
သင့်အသက်တာ Decorating အံ့သြစရာလက်ဆောင်များ: အဆိုပါရနံ့ကုထုံ humidifier တစ်အလှဆင်အပိုင်းအစကဲ့သို့စူပါခေတ်သစ်သစ်သားစပါးကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ရနံ့ကုထုံ humidifier သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှလက်ဆောင်ချစ်သူများအဖြစ်ဤချစ်စရာကောင်းတဲ့ humidifiers သုံးစွဲဖို့ကောင်းပါသည်။
အာမခံ: ဒါဟာရနံ့ပျံ့နှင့် ultrasonic humidifier အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြောင့်လည်းညဥ့်ဆီမီးခွက်နဲ့အလှဆင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရေထဲသို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏ပေါက်ပေါင်းထည့်ခြင်း, ထိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ humidifier လေထုအရည်အသွေးကို refresh မှအမွှေးအကြိုင်အနံ့နှင့်အေးမြခိုးအငွေ့မရေတွက်နိုင်အောင်များပြားမည်ဖြစ်သည်။ လက်ခံနိုင်ဖွယ် OEM / လိမ္မော်ရောင် / OBM န်ဆောင်မှုများ။
လီလီပန်းအိုးတိတ်ဆိတ်မူလစာမျက်နှာ ROOM တွင် Ultrasonic Humidifier
220ML မူလစာမျက်နှာ Humidifier Mini ကိုအိတ်ဆောင်ထုတ်ကုန်များ
မူလစာမျက်နှာ Humidifier ဆောင်းရာသီမှာတော့မြူခိုးအကောင်းဆုံး Cool
မြေတပြင်လုံးကိုနေအိမ်နေထိုင်မှု Humidifier ပစ်မှတ် Options ကို
round Shape မူလစာမျက်နှာ Humidifier ကနေဒါဂျပန်အိန္ဒိယ
အကောင်းဆုံးမူလစာမျက်နှာ Automation အငွေ့ Humidifier သန့်ရှင်းရေး
မူလစာမျက်နှာအီလက်ထရောနစ် Air ကို Humidifier ပြီးတော့ Air ကိုစင်ကြယ်စေ
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ Home Depot Humidifier ကနေဒါ Filter
 လိပ်စာ:No.372 Donghuan Rd. Shajing, Baoan, Shenzhen, China 518125, Shenzhen, Guangdong
500ml Air ကို Humidifier
500ml Ultrasonic Air ကို Humidifier
Air ကို Humidifier 500
Atom Air ကို Humidifier
usb Air ကို Humidifier
Rohs Air ကို Humidifier